जान्नुहोस् ‘R’ बाट नाम सुरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् – mero sathi tv
On १७ चैत्र २०७४, शनिबार १८:०६
‘R’ बाट नाम सुरु भएका मानिसहरुको गुण ९ अंकसँग मेल खानेगर्छ । यस्ता व्यक्तिहरुमा सहनसक्ने क्षमता, बुद्धिमान र मानवता जस्ता गुणहरु उच्च हुने गर्छन् ।
विचारका हिसाबले पनि उनीहरु अरुको अगाडि डिप्लोम्याट जस्तै देखिन्छन् । व्यक्तिगत चरित्रमा पनि उनीहरु बलियो हुने गर्छन् । उनीहरुमा सोच्न सक्ने क्षमता, दया, र उच्च विचार बढी हुन्छ । परिवार, साथी, तथा घरप्रति उनीहरुको सधै न्यानो भावनाहरु रहिरहन्छ ।
‘आर’ बाट नाम सुरु भएका मानिसहरु प्राय अरुको फाइदाका लागि बढी सोच्ने गर्छन् । अरुलाई सल्लाह सुझाव दिन र मदत गर्न सधै तयार रहन्छन् । त्यस्तै कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि हरेक व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्छन् ।
उनीहरु सिर्जनशिल हुन्छन् । कला तथा सस्कृतिप्रति उनीहरुको चासो समेत रहेको हुन्छ । आरबाट नाम सुरु भएका मानिसहरु मनोरञ्जन गर्न ज्यादा रुचाउने गर्छन् । कुनै पनि सुन्दरताको बयान गर्न उनीहरु पछि पर्दैनन् ।
के तपाईले सपनामा सर्प त देख्नु भएको छैन् नि ? पढ्नुस् सपनामा सर्प देखिनु राम्रो कि…
तामाको औठी लगाउदा हुनेछ यी ८ चमत्कारी फाइदा, कुन औलामा लगाउने?
दिल्ली–काठमाडौं बसबाट ११२ थान अवैध मोबाइल बरामद
प्रदीप स्टारर ‘लिलिबिलीे’लाई अग्रिम बुकिङमा सर्वाधिक शोज
आफ्नै १३ बर्षिया नाबालक छोरीलाई पनि नछोड्ने, बलात्कार गर्ने, बाबु हैन राक्षस हो [भिडियो हेर्नुहोस ]
केहिबेर अघि भएको अल्जेरियन सेनाको जहाज दुर्घटना हुदा २५७ जनाको मृत्यु -
केहिबेर अघि भएको अल्जेरियन सेनाको जहाज दुर्घटना हुदा २५७ जनाको मृत्यु –